Tuugo hubeysan ayaa dhac u geystay bank dalka Brazil laakin waxay xadeen khasnad khaldan… – Hagaag.com
Posted on 5 Diseembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Habeenkii Arbacada ee lasoo dhaafay, Brazil waxaa ka dhacay dhac ballaaran oo ka dhacay bangi ku yaal magaalada waqooyiga ku taal ee Cameta, taas oo loo adeegsaday walxaha qarxa iyo israsaaseyn iyo qafaalashada dadkii halkaasi ku sugnaa, ka dib markii hawlgal kan la mid ah uu ka dhacay koonfurta, laakiin dambiilayaashu ama tuugada ayaa laabtay, iyagoo niyad jabsan maxaa yeelay “waxay xadeen khasnad khaldan.”
Howlgalkan cusub ayaa sababay dhimashada mid ka mid ah la haystayaashii oo ay qafaasheen tuugada, halka mid ka mid ah dadka magaalada ay lugta ka dhaawaceen, sida ay sheegeen maamulka deegaanka oo wali baadi goobaya kooxihii falkaasi ka dambeeyay.
Cameta waxaa ku nool dad gaaraya 130,000, caasimada gobolka Amazon ee Para.
Waaxda amniga ee magaalada Para ayaa sheegtay in ka badan 20 qof oo aad u hubeysan ay weerareen qeyb ka mid ah bangiga dowladda, “Banco do Brasil”, laakiin ma aysan tilmaamin qiimaha lacagta la xaday.
Gudoomiyaha Para Helder Barbalho ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday aysan helin waxay u socdeen, maadaama ay “xadeen khasnad khaldan.”
Shabakada wararka ee “G1” ayaa daabacday markhaatiyo dadka deegaanka ah oo sheegay in tuugada ay kaxeysteen tiro dad ah oo daawanayay ciyaar kubada cagta ah oo ka dhacday agagaaraha oo ay u adeegsadeen gaashaan dad.
Mar dambe, waddo u dhow, boolisku waxay ka heleen gaari xamuul ah oo laga tagay oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa.